Katalàna : Anelanelan’ny Fanantenana sy Fahavinirana Taorian’ny Fitsapan-kevibahoaka Ho An’ny Fahaleovantena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Oktobra 2017 13:20 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Português, Ελληνικά, русский, Türkçe, Español
Olona antitra iray manompa ny polisy nasionaly nandritra ny fitsapan-kevibahoakan'i Katalàna ny 1 Oktobra 2017. Sarin'i Vicens Forner Puig, famoahana nahazoana alàlana.
[Lahatsoratra voalohany navoaka tamin'ny teny espaniola ny 5 oktobra 2017. Mandefa any amin'ny pejy amin'ny teny espaniola ireo rohin'ity lahatsoratra ity.]
Navoakan'ireo olom-pirenena manana ny zo hifidy any Katalàna tamin'ireo tambazotra sosialy, miaraka amin'ny tenifototra #votarem (hifidy izahay), ireo sary ary fijoroana vavolombelona mahakasika ny fandraisan'izy ireo anjara tamin'ilay fitsapan-kevibahoaka ho an'ny fahaleovantena niteraka adihevitra be, ho an'ny faritra, nokarakaraina ny 1 oktobra 2017 ary nolazain'ny governemanta ifotony ao Madrid ho tsy ara-dalàna, ka nambarany ho tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana.
Niantomboka ny taona 2012 ny dingan'ny fitakiana ny fahaleovantenan'i Katalàna ankehitriny, rehefa nangataka ny fahazoandàlana tany Madrid ny hikarakarana fitsapan-kevibahoaka momba ny fahavitantena ny Parlementa katalàna. Na teo aza ireo fandàvana tsy ankijanona, notohanan'ny Tribonalin'ny lalampanorenana, nisafidy samirery ny governemanta tamin'ny taona 2014 fa hampivory manokana hijery ny fandehan-draharaha tsy misy ifamatorana, ary ny farany, dia ny fitsapan-kevibahoaka, 10 andro lasa izay.
Niharan'ny kiana maro ny fomba nandrakofan'ny fahitalavi-panjakana sy ireo media goavana hafa ilay hetsika, fa afaka narahana isa-minitra ihany anefa ny fandehan'ny raharaha nandritra ny andro teny ifotony, tamin'ny alalan'ireo tambajotra sosialy. Raha ny marina, haingana be ny vohikala dia tondrak'ireo fijoroana vavolombelona milaza fananana fanantenana, ireo olona nandany ny alina tany amin'ireo kolejy nanaovana ny fifidianana mba hialàna amin'ny hoe hihidy izy ireo na hoe hisy filaharana lava reny, izay nitarafana ireo ora maro niandrasana mba hahafahana mifidy.
Tao anatin'ireo sary izay tena nampihetsi-po manokana ireo mpisera amin'ny Aterineto, dia ny an'ireo olona efa antitra miditra na mivoaka ny efitra fifidianana eo ambany tehaky ny manodidina. Ny fandraisan'izy ireo anjara nandritra ny dingana rehetra dia nahatonga ireo teny filamatra toy ny hoe Sense les àvies no hi ha revolució (« Tsy misy revolisiona tsy miaraka amin'ireo renibe » ) na Nuestros abuelos no se tocan (« Aza kitikitihana ireo renibenay »)
Ao anatin'ny fotoana feno famoretana toy izao, manamaivana kokoa ireo fahatapahankevitra sasany.
Ny herisetran'ireo hery fiarovana espaniôla no tsy azo iadian-kevitra fa tena nanaovana adihevitra be tokoa : ireo lahatsarin'ny fiarabe feno polisy avy any Courdoue, avy amin'ny tendro iray ao amin'ny firenena mihitsy, ka hatramin'ireo sarin'ireo mpamonjy voina basques tonga hanjohy ireo mpamonjy voina katalàna mba hiaro ireo vata fandatsaham-bato. Maro be ny fanehoankevitra tonga nameno ireo bitsika, ireo lahatsary sy ireo lahatsoratra izay manindrahindra na mitsikera ny famoretana, tao anatin'ny adihevitra mahamay mikasika ilay resaka maha-ara-dalàna na tsy maha ara-dalàna ilay fitsapan-kevibahoaka.
Tsy nijanona tao Katalàna ihany ny fahavinirana manoloana ireo herisetran'ireo polisy. Ohatra, Tao aminà bitsika lasa nalaza be tao amin'ny Aterineto, manazava i Patricia Horrillo, mpikatroka mafana fo sady mpanao gazety any Madrid, fa tsy tokony afangaro amin'ireo fironana ara-politika manokana ny tsikera amin'ny famoretana mitranga ataon'ireo polisy :
Afaka tsy miombon-kevitra amin'ny tokony hananana fahaleovantena ianao, fa raha toa ianao mijery ireo sarin'ny famoretana ataon'ny polisy ankehitriny ka tsy mahatezitra anao izany, miahiahy ihany aho.
Hita teny amin'ireo làlana ny fahavinirana, niaraka taminà fiantsoana firaisankina miaraka amin'ny vahoaka Katalàna, tany amin'ireo tanàndehibe maro ao amin'ny firenena, indrindra tao Madrid, tao Séville na tao Grenade.
Fanombohan'ny famoriana ho fanohanana ny any Katalàna, ao Puerta del Sol.
Ankoatra ireo valim-pifidianana tamin'ny fitsapan-kevibahoaka sy ireo raharaha mafampàna ao amin'ny firenena, namerina ireo zavatra nisongadina mampihavana, ireo tambajotra sosialy, ohatra tamin'ireo sary na lahantsarinà olona izay nandeha nifidy nirakotra ny sainam-pirenena espaniola, repoblikana na nanao ny fanamian'ny ekipa nasionaly mpilalao baolina kitra, ireo sary izay niseho tamin'ny fitokonana nokarakaraina roa andro taorian'ny fifidianana mba hanoherana ireo herisetran'ny polisy.
Así hacemos aquí la revolución. Que no os engañen los medios. #3Oct #VagaGeneral3O pic.twitter.com/uSL3862R9f
Toy izao ny fanaovana revolisiôna aty. Aza mety ho fitahin'ireo media.
Maro ireo olom-pirenena nisafidy ny tsy handray anjara tamin'ilay fifidianana, izay heverin'izy ireo ho tsy manara-dalàna na tsy misy ilàna azy. Kanefa, raha jerena ireo sarin'ny famoretana, ireo sasany, izay tsy nieritreritra ny hifidy, dia naneho ny fanapahankeviny ny hanao izany ihany, ho endrika hetsi-panoherana ary nitambatra ho firaisankina amin'ny fitokonana.
Tsy ilàna fanazavana io fihetsika io. Izany no làlana tsara tokony tohizana.
Toy izany koa, ireo mpifidy sasany nisafidy ny « tsia » ho an'ny fahaleovantena ary nanazava tao amin'ny tambajotra sosialy ny fanapahankeviny ny handray anjara amin'ny fitsapan-kevibahoaka, izay heverin'izy ireo ho fampiharana ny zo demokratika mila arovana.
Un manifestante que votó “NO” en el #CatalanReferendum explica los motivos por los que ha ido a la huelga @fenixenflames #VagaGeneral3O pic.twitter.com/SvBY2wKR6u
Mpanao hetsi-panoherana nifidy ny « tsia » tamin'ny fitsapan-kevibahoakan'i Katalàna, manazava ireo antony nanosika azy hitokona.
Namoha ihany koa fifanoherana teo amin'ny ampahan'ny vahoaka katalàna izay tsy nahatsapa ho voakitika amin'ilay resaka na tsy afaka mandray anjara amin'ny fifidianana ilay fitsapan-kevibahoaka. Tao amin'ny lahatsoratry ny gazety El Salto, manontany tena ilay Andalozy mpiaro ny zon'ny vehivavy, Ana Burgos, izay mipetraka any Katalàna, hoe « inona no ataon'ny Andalozy tsy miaro na inona na inona eto, anatin'ireo resaka rehetra tsy fitiavana Andalozy izay iainako isan'andro. »
Tamin'ny voalohany ary nandritra ny fizotry ny raharaha, tsy nahatsapa ho voakasik'io mihitsy aho : resaka fahaiza-mitarika mifanatona izay tsy misy idirako ao anatinà fiarahamonina iray, tahaka ireo hafa maro, fatra-mpanivana sy mpanavakavaka ary mpanjakazaka fahefana, izay tsy maneho ahy mihitsy ny tetikasa nasionaliny ara-politika, zara raha misy fandinihantena. (…)
Avy eo, nanosika anay hiaro dingana iray tsy anananay fahatokisana sy andrim-panjakana tsy itokianay, na farafahakeliny mitondra olana ho an'ny ankamaroanay, ireo zavatra ratsy nataon'i Rajoy [ny filoha] sy ireo namany tamin'ny vahoaka (…) Ny tena marina, nivoaka an-dàlambe izahay mba hiaro ireo rahavavinay sy mpiray vodirindrina aminay, vahoaka natao ho lasibatra.
Tao anatin'ireo tsikera hafa sy fifanoheran-kevitra navoitra, notsipihan'ny sasany ireo mpifindra monina an'aliny maro mipetraka ao Katalàna, nefa tsy manana zo handray anjara amin'ilay fitsapan-kevibahoaka. Sohaib Takkal Hassani, mpikatroka mafana fo sady mpitondra tenin'ny fikambanana Juventud Multicultural Musulmana (Tanora silamo mandala kolontsaina maro) nilaza izao tamin'ny famoahany lahatsoratra tao amin'ny Facebook :
Izy : Andeha hifidy ve ianao amin'ny alahady ?
Izaho : Tsia, tsy manan-jo hifidy aho.
Izy : Ary raha nanana ianao, hifidy ve ?
Izaho : Tsy manan-jo hifidy aho.
Izy : Azoko izany, fa raha toa ka nanana ianao, hifidy ?
Izy : Tena matotra aho…hifidy ve ianao ?
Izaho : Handoa aho, satria tsy afaka mifidy.
Fàtima Aatar, mpahay momba ny olombelona no sady mpikatroka mafana fo, nisafidy ny gazetiboky La Directa momba ny hoe tsy afaka maneho ny heviny ireo vahiny mponina ao an-toerana :
Ahoana moa ny hisian'ny hoe ao anatin'ny fampiharana ny tsy fankatoavana ara-politika, araka ny lalàna sy ara-tsosialy, tsy misy tsy fankatoavana momba io resaka io ? Nahoana no nisafidy ny handova avy amin'ny lalàna espaniola momba ireo zo sy fahafahan'ny vahiny, amin'ny fandraisana ho anaty kajikajy fa io no iray amin'ireo olana tena mampiavaka ny fitondràna ? Tsy fankatoavana ? Rahoviana ary ho an'iza ?
Moha Gereou, mpanao gazety sady mpikatroka mafana fo mipetraka any Madrid, nanatsoaka ny fitovian-dàlana eo amin'ireo herisetra ara-batana sy ara-pitantanana ataon'ny Fanjakana Espaniola amin'ireo mpifindra monina ary ny famoretana nandritra ilay fitsapan-kevibahoaka :
Raha tsy espaniola ianao ka te-ho lasa espaniôla, manosika ny tenanao hianjadian'ireo herisetra ianao.
Raha espaniola ianao ary tsy te-ho izany intsony, manosika ny tenanao hianjadian'ireo herisetra ianao.
Hita ho feno be ireo andro, ireo herinandro ary ireo volana ho avy, ary sarotra ny haminany ireo zavatra hitranga. Kanefa, mazava be fa i Espaina sy i Katalàna dia samy miatrika ny iray amin'ireo fizotran-draharaha sarotra indrindra sy hametra ny hoaviny amin'ny tantara demokratikany maoderina, ary hanamarika ny Fanjakana sy ireo vahoaka izay mamorona izany, ary indrindra fa ireo olom-pireneny, ny fomba hamalian'ireo andrim-panjakana izany.